सूचीमा भएका सबै अनुच्छेदहरूमा उही गोलिचिन्ह वा क्रमाङ्कन ढाँचा लागू गर्न, सबै अनुच्छेदहरू चयन गर्नुहोस्, ढाँचा - गोलिचिन्हहरू र क्रमाङ्कन रोज्नुहोस्, र ढाँचामा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईँ सङ्ख्या वा गोलिचिन्ह सूची सम्पादन गर्नका लागिगोलिचिन्हहरू र क्रमाङ्कन उपकरणपट्टीमा आदेशहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ . क्रमाङ्कन वा गोलिचिन्ह ढाँचा परिवर्तन गर्नका लागि, गोलिचिन्हहरू र क्रमाङ्कन प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस्.
अनुच्छेद शैलीहरूले तपाईँलाई क्रमाङ्कन माथि ठूलो नियन्त्रण दिन्छ जुन तपाईँले कागजातमा लागू गर्नु भएको थियो. जब तपाईँले शैलीको क्रमाङ्कन ढाँचा परिवर्तन गर्नुभयो भने, सबै अनुच्छेदहरू शैली प्रयोग गरेर स्वत: अद्यावधिक हुन्छ.
क्रमाङ्कन शैली बाकसमा, क्रमाङ्कनको प्रकार चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ प्रयोग गर्न चाहनु हुन्छ।
अनुच्छेदहरूमा शैलीमा तपाईँ क्रमाङ्कनमा थप गर्न चाहेको शैली लागू गर्नुहोस् .
Title is: क्रमाङ्कन र क्रमाङ्कन शैलीहरू